Wasaaradda waxbarashada Puntland oo tobabar u furtay kooxo tiro koob guud ku samaynaysa waxbarasahda Puntland – Radio Daljir
Abriil 18, 2013 2:59 b 0
Garoowe, April 18- Wasaarada Waxbarshada ee Puntland ayaa maanta u bilowday Tababar xubno? laga soo xulay goballada Puntland kuwaasi oo samayn doona tirakoob guud oo lagu sameynaya? barayaasha wax ka dhiga deegaanda Puntland .
Tababarkaan oo socon doona muddo labo maalmood ah ayaa waxaa maanta daah furay Maxamed Cabdiwahaab Axmad Agaasimaha guud ee wasaarada Waxbarshada Puntland.
Agaasimuhu waxaa uu sheegay dadka maanta loo furay tobabarka inay u kala qeybsan yihiin? labo qaybood oo kala ah Isticmaalka Kaamerooyinka oo macalin walba looga qaadayo sawir loogu dhajin doono ID Card ka , qaybta labaadna wuxuu sheegay inay tahay? qaabka loo aruurin doono macluumaadka macalinka.
Wasiirka waxbarshada Puntland Cabdi Faarax Siciid (Juxa) ayaa sheegay in arintaan Soo aruurinta macluumaadka macalinka ay tahay mid wax wayn kabadli doonta habsimo usocoda waxbarshada Puntland.
Wasiir Juxa ayaa sidoo kale Sheegay in Howsha Tirakoobka macalinka ay sahlayso in lahelo tirada macalinmiinta Puntland ayna helaan Karar aqoonsi Falal lagu aruuriyo Macaluumadka macalinka .
Wasiirka ayaa ugu dambayn? sheegay? Barnaamij lagu magacaabo Global Partnership for Education oo laga wado Soomaaliya oo dil inay ka faa;idanaysanayaan macaliimiin? gaaraysa 300 kuwaas oo? sanad waliba helaya gunno.